MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော် တစ်ဦး ကျဆုံး
နိုဝင်ဘာ (၅) တနင်္လာ
လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာ (၁၉) တွင် စီးအင်ရွာသားများကို နှိပ်စက် သတ် ဖြတ်ခဲ့သော ဗမာအစိုးရ စစ်ကြောင်းများကို ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၂) လက်အောက် တပ်ရင်း (၆) မှ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ် ရဲဘော်များ နောက်တစ်ကြိမ် လိုက်လံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ဤသို့ ဗမာစိုးရ စစ်ကြောင်းများကို လိုက်လံတိုက်ခိုက်ရာ ဗမာအစိုးရ ဘက်မှ အင်အားများလွန်းသောကြောင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော် လဂျာ ကျဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဗမာအစိုးရတပ်များသည် ဖားကန့် မော်မောင်းဘွမ်း ကို မရမနေ ပြန်လည်တိုက်ခိုက် နေကြောင်း၊ လက်နက် ကြီးများဖြင့် အဆက်မပြတ် ပစ်ခတ်သောကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ (၄) ဦးသေဆုံး သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နောက်ပြီး တာမခံ နမ့်မော်နှင့် ဆိုင်း တောင်ကြားတွင် ခရီးသည်တင်း ဟိုင်းလပ်ကား တစ်စီးကို ဗမာအစိုးရ စစ်မှ ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ကားနှင့်တကွ ခရီးသည် များအလုံး မီးလောင်ပြာကျ သွားကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
The patriotic soldiers from KIA (6) battalion, which is under KIA (2nd) brigade, followed and firing again Burmese soldiers, that they killed and tortured Si-in villagers, on 19th October according to the KIA front-line officer report. While the KIA troop followed and fired the brutal Government soldiers, KIA soldiers La Ja died in the battle, because of too many Burmese soldiers on that troop. Continuously, Burmese soldiers fired many times with heavy artillery weapon to the Maw Mau Mountain. Then, the Government troops fired and burned hilux car between Nam Maw and Seng Tawng, all the passengers had been killed and burnt.
at 11/05/2012 06:25:00 PM